Hello Nepal News » मेस्सीबिनाको बार्सिलोना आज बेटिसको सामना गर्दै : पार लाउलान् ग्रीजम्यानले ?
मेस्सीबिनाको बार्सिलोना आज बेटिसको सामना गर्दै : पार लाउलान् ग्रीजम्यानले ?
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज साबिक विजेता बार्सिलोना लिगको दोस्रो खेल खेल्दैछ । बार्सिलोनाका लागि यो सिजनको पहिलो होम म्याच पनि हो । बार्सिलोनाले यो खेलका लागि रियल बेटिसलाई आफ्नो घर क्याम्प नोउमा स्वागत गर्दैछ । खेल नेपाली समयअनुसार राति १२ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
यसअघि पहिलो खेल अवे मैदानमा एथ्लेटिक बिल्बोसँग १–० ले हारेको बार्सिलोनाका लागि आजको खेल महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आज आफ्नो घरमा हुने खेलमा बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी हुनेछैनन् । चोटसँग जुधिरहेका मेस्सी पूर्ण रूपमा फिट नभएपछि प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले उनलाई प्रारम्भिक टोलीमै राखेका छैनन् ।
मेस्सी मात्रै हैन, यस खेलमा फरवार्ड लुइस स्वारेज र विंगर उसामान डेम्बेले पनि चोटकै कारण छैनन् । टोलीका गोलकर्ता प्रमुख खेलाडी नहुँदा आज बार्सिलोनाको भरोसा नयाँ फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यानमाथि हुनेछ । तर, ग्रीजम्यानले पनि बार्सिलोनामा लय समात्न सकिरहेका छैनन् । उनले बार्सिलोनाका लागि हालसम्म ६ खेल खेल्दै मात्रै १ गोल गरेका छन् ।
आज क्याम्प नोउमा सिजनको पहिलो होम म्याच हुँदा टोलीका लागि गोल गर्ने र जिताउन प्रमुख दबाब ग्रीजम्यानमाथि नै हुनेछ । नयाँ क्लबमा आफूलाई साबित गर्न पनि उनका लागि आजको खेल महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
सिजनको पहिलो खेल हारेको बार्सिलोना अंकविहीन छ । आज ऊ आफ्नो घरमा हुने खेल जितेर नयाँ सिजनमा अंकको खाता खोल्ने दाउमा रहेको छ । हाल अंक तालिकामा बार्सिलोना १८औं स्थानमा छ भने बेटिस १७औं स्थानमा छ ।
ला लिगामै आज अन्य खेल पनि हुनेछन् । जसमा राति ८ः४५ बजेबाट अलाभेस र इस्पान्योल खेल्नेछन् भने सोही समयमा मालोर्सा र रियल सोसिडाडको खेल पनि हुनेछ । त्यस्तै, राति १०ः४५ बजेबाट लेगानेस र एथ्लेटिको मड्रिडको खेल हुनेछ ।
प्रकाशित मिति ८ भाद्र २०७६, आईतवार ०३:४१